Nagu saabsan - Henan Ascend Makiinado & Qalabka Co., Ltd.
Henan Ascend Makiinado & Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2005 waxayna ku taalaa aaga teknolojiyada sare ee Zhengzhou City, Gobolka Henan. Maaddaama ay tahay shirkad tiknoolajiyad wadata qalabka qalabka macdanta, waxaa ka go'an R&D, wax soo saar, iibin iyo adeegga iibka kadib ee mashiinnada iyo qalabka macdanta.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo saarto shirkadda waa kuwa wax shiida, qalabka wax shiida, qalabka ka faa'iideysta macdanta, qalajiyaha Rotary iyo qalabka wax lagu shiido ee wax shiida ama wax shiida. Marka lagu daro suuqa gudaha ee Shiinaha, Mashiinnada Ascend waxay ganacsigooda ku ballaariyaan in ka badan 60 waddan iyo gobollo.
Waxay diiradda saareysaa tayada wax soo saarka iyo adeegga iibka kadib, Ascend waxay ku guuleysatay ammaan ballaaran iyo kalsoonida macaamiisha caalamiga ah. Shirkaddu waxay leedahay koox injineer xirfadlayaal ah oo mas'uul ka ah la-tashiga farsamada-iibinta kahor, xalalka farsamada ee habka iibka, rakibaadda, howlaha iyo iibinta kadib si loo hubiyo in macaamiisha ay u iibsan karaan una isticmaali karaan qalabka nabadgelyada maskaxda.
Shirkadeena Ascend waxay u qaadataa adeegga macaamiisha shaqadeena ugu muhiimsan, waxaan heysanaa adeeg iib ah oo dhameystiran kahor iyo kadib adeegga iibka.
Adeeg horay loo sii iibiyay
(1) Talo ku saabsan doorashada qaabka.
(2) Naqshadeynta iyo soosaarida mashiinnada iyadoo loo eegayo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha
(3) Shirkaddu waa u bilaash adeegsadaha injineernimada goobta iyo qorshaynta shaqaalaha farsamada ee loogu talagalay isticmaalaha inuu u qaabeeyo hannaanka iyo barnaamijka ugu wanaagsan.
Ka dib iibinta Adeegga
(1) Diyaarso farsamayaqaanno si ay u aadaan goobta si ay u hagaan rakibaadda
(2) Haddii mashiinkaagu ka dhammaado xilligii dammaanadda, waxaad aadi kartaa xafiiska Nile-ka ee dibadda si aad uga iibsato qalabka dayactirka.
(3) qalab dhameystiran oo la rakibay, 1-2 shaqaale farsamo oo waqti buuxa ah si ay ujoogaan lacag la'aan si ay uga caawiyaan macaamiisha waxsoosaarka goobta ee 1 bil, ilaa qanacsanaanta isticmaalaha.
Waa Maxay Alaabooyinka Aan Siino?
1. Qalabka burburin: burburiye daanka, burburiye saamaynta, fur fur, dubbe burburiye, duub rullaluistemadka, burburiye ganaax, burburiye xarunta, dhagax jajabinta wax soo saarka, iwm
2. Mobile burburin Warshad: jejebiyey daanka guurguura, burburiye saamaynta mobile, jebiyey koorta wareega, mobile vsi ciid samaynta warshad, iwm.
3. Qalabka wax lagu shiidiyo: milkiilaha kubbadda, dhagax macdanta, miraha raymondka, dhalada qoyan, iwm.
4. Qalabka Ciidda iyo Dhagaxyada: sameeyaha ciidda, warshadda samaynta ciidda vsi, nooca ciidda ee baaldiga lagu dhaqo, dhaqeyaha ciidda ee muquuninta, iwm.
5. Mashruuca macdanta Dahabka ah iyo xalka: warshad trommel dahab ah oo guurguura, taangiga haanta, leaching taallo, khadka kala soocida cuf isjiidadka, CIL / CIP, iwm.
6. Qalabka Waxsoosaarka Macdanta: Qeybinta muquuninta, qiiqa muquuninta, miiska ruxruxa, mashiinka jugta, isku soo uruurinta dahabiga sanduuqa, haanta leaching, kala sooca magnetic, mashiinka sabeynta, iwm.